Raysal Wasaaraha Dalka Oo Furay Shirwaynihii 4aad Ee Dhalinyarada Dalka. - Cakaara News
Raysal Wasaaraha Dalka Oo Furay Shirwaynihii 4aad Ee Dhalinyarada Dalka.
Adisababa(cakaaraanews) khamiis,1da September 2016. Waxaa ka furmay caasimada dalka ee Adiisababa shirwaynihii 4aad ee dhalinyarada dalkeena itoobiya kaasi oo ay ka soo qayb-galeen 3,000 oo ah wakiilada dhalinyarada ka socda deegaanada dalka iyo 2da ismaamulada magaalooyink ee dalka.
Shirwaynaha 4aad ee dhalinyarada dalka ayaa waxaa furay Raysal wasaaraha JDFI mudane Hailemariam Dessalegn. Wuxuuna sheegay in ay dhalinyarada dalku tahay udub dhexaadka isbadalka koboca dhaqaalaha dalka ee lagu cidhib tirayo saboolnimada loogana baahan yahay in ay si fir-fircoon uga qayb qaataan fulinta istaraatajiyadaha siyaasadeed, dhaqaale iyo dimuqoraadiyadeed ee dalka u dajisan. Raysal wasaaraha ayaa sharax dheerka bixiyay doorka ay dhalinyaradu ku leeyihiin hirgalinta hawlaha horumarka, nabadgalayda iyo maamulka suuban.
Wasiirka wasaarada dhalinyarada iyo ciyaaraha JDFI mudane Rudwaan Xuseen ayaa ka warbixiyay qorshayaal ku salaysan xidhmaha horumarinta dhalinyarada dalka wuxuuna sheegay in shirwaynahani yahay mid sii xoojinaya ka midha-dhalinta hadafka iyo himilada dalka.
Shirwaynahan ayaa waxa ka hadlay wakiilada dhalinyarada deegaanada dalka. waxayna sheegeen in ay deegaanada ay ka socdaan ka jiraan horumar balaadhan iyo fursadaha shaqo abuurka loogu samaynayo dhalinyarada loona baahan yahay in la sii adkeeyo. Waxayna sheegaan in ay dhalinyaradu ka soo baxayaan waajibaadka ka saaran hirgalinta istaraatajiyadaha horumarineed ee u dajisan dalka.
Shirwaynaha ayaa waxaa DDSI uga qaybgalay 100 dhalinyaro ah, oo ay hogaaminayeen wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha DDSI mudane Maxamed Bile iyo wasiir ku xigeenka dhalinyarada iyo ciyaaraha DDSI mudane Cabdishakuur Cismaan.